အတာသင်္ကြန်ပွဲ လည်ပတ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အခမဲ့ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် ထိုင်းရောက် မြန်မာအ? - Yangon Media Group
အတာသင်္ကြန်ပွဲ လည်ပတ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အခမဲ့ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် ထိုင်းရောက် မြန်မာအ?
မြဝတီ၊ ဧပြီ ၅
မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်လည်ပတ်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများကို ထိုင်း နိုင်ငံဘက်မှ အခမဲ့ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများသည် ဧပြီ ၅ရက် နံနက် ပိုင်းမှစတင်၍ အမှတ်(၁) ချစ်ကြည် ရေးတံတားကြီးမှတစ်ဆင့် ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ အလုံးအ ရင်းဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ နေကြကြောင်း သိရသည်။
”အခုပြန်လာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကို ဧပြီ ၅ ရက်ကနေ ၃ဝ ရက်အထိ ထိုင်းအစိုးရကနှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ကို ရှေးရှုပြီး အခမဲ့ပြန်ခွင့်ပြုလိုက် တာပါ။ အဲဒီလိုပြန်ရင် အရင်က တံတားကြီးထိပ်မှာ အိမ်ပြန်ျွနနညအမပ တုံးကြီး ထုရပါတယ်။ ဒျွီနနညအမပ တုံးကြီးထုပြီးတဲ့သူသာ ထိုင်းကို ပြန်ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတုံးထုရင် ဘတ် ၁၁ဝဝ ပေး ဆောင်ရတယ်။ အခုတော့ ထိုင်း အစိုးရက တရားဝင်ပြန်ခွင့်ပြုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘတ် ၁၁ဝဝ ပေး စရာမလိုဘဲ အခမဲ့ပြန်ခွင့်ရတာပါ။ အပြန်မှာ သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော် လွန်သွားရင်တော့ ဒဏ်ကြေးပေး ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်”ဟု ထိုင်းဘက် ခြမ်းမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ လွယ်ကူစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအ တွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ သော မြန်မာတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်
မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားပြည့်စုံစွာ ဖြင့် နေရပ်သို့ပြန်မည့်အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အိမ်ပြန်ခရီးတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အလုပ်သမားသံအရာရှိများထံသို့ ဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားရန်ု လည်း အသိပေးထားသလို သက်ဆိုင်ရာသံအရာရှိများ၏ ဖုန်းနံပါတ် များကိုလည်း ပေးထားသည်။
”အခုပြန်လာတဲ့ မြန်မာအ လုပ်သမားတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာလည်း အခကြေး ငွေမယူပါဘူး။ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ အနေနဲ့ အခုလို နေရပ်ပြန်ရင် ပြည် တွင်းဝင်ခွင့်တုံးထုရပါတယ်။ အဲဒီလို ဝင်ခွင့်တုံးထုရင် တစ်ဦးကို ဘတ် ၂ဝပေးရပါတယ်။ အခုတော့ ပေး စရာမလိုဘဲ အခမဲ့ပြန်ခွင့်ရကြ ပါတယ်။ အရင်နေ့တွေက ကောင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ရ ပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကောင်တာ သုံးခုထိဖွင့်ပေးပြီး ပြန်ရလွယ်ကူ အောင် ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်”ဟု မြဝတီအမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးဇော်နိုင်က ပြောကြားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်နယ်စပ် အမှတ် (၁)ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဂိတ်မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ သို့ ဧပြီ ၅ရက် နံနက်ပိုင်းက နေရပ် ပြန်လာကြသည့် မြန်မာအလုပ် သမားဦးရေမှာ ၄၅ဝဝ ခန့်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။